I-Semalt ifaka iKantu: I-Ultimate Visual Web Scraping Tool
Ukuba usebenza ekukhankeni idatha yezemali okanye uluhlu lwamaxabiso kwiziko le-e-commerce ngaphandle ukukhangela, i-Kantu yinto ekhethekileyo kuwe! Ukuqhayisa abanomdla, ukukhutshwa kweedatha yewebhu yinkqubo yokufumana ulwazi oluxabisekileyo kwiiwebhusayithi kwaye ulondoloze kwiipredishithi kunye nolwazi lweenkcukacha.
njani Umhleli weKantu usebenza?
I-Kantu ilandelela ngokuzenzekelayo idatha kwiwebhsayithi ngaphandle kokufuna ukuba ube nolwazi lwenkqubo. NgeKantu, ukuguqula umxholo wewebhu kwi-data ehlelwe kakuhle kunye nedokhumenti akuwona umsebenzi onzima. Le ithuluzi lokucoca lewebhu liyaziwa ngokubanzi ngokukhipha itekisi kwi-Portable Document Format (PDF) kunye namavidiyo.
Idata ekhishiwe idla ngokugcinwa kwifom yeefayile ze-CSV okanye ibhalwa kwiinkcukacha zolwazi nge-Kantu's Application Programming Interface (API). I-Kantu ivumela abathengisi ukuba bachonge baze baveze idatha ukuze ihlolwe ngokubonakalayo. Ukusebenzisa isisombululo sewebhu ngokulula kulula. Ukutshitshisa idatha kwiwebhusayithi usebenzisa i-wizard ye-Kantu, ngokuzenzekelayo izalathisi ezibhenkcekileyo zokumakisha idatha ejoliswe kuyo.
Umhleli we-Kantu usebenzisa i-Optical Character Recognition (OCR) ukukhangela ulwazi oluvela kumthombo wakho we-HTML. I-OCR yindlela ephakamileyo yokusebenza eyenza iifayile zeFayile, iividiyo kunye neemifanekiso eziphezulu.
Kutheni ukhetha Umhleli weKantu?
Umhleli we-Kantu ungomnye wezixhobo eziphezulu zokusetyenziswa kwewebhu. Lo mhleli usetyenziswe ngeenjongo ezahlukeneyo. Nazi izizathu eziphambili ekufuneka ziqwalasele i-Kantu yeprojekthi yakho yokutsala iwebhu.
Izixhobo ezakhelwe ngaphakathi
Umhleli we-Kantu uza nezixhobo ezakhelwe njengeziprogram, izikripthi kunye nama-macros. NgeKantu, unokwenza idatha kwiziko lewebhu ngokuzikhethela iimpawu zalo ukuhambelana neemfuno zakho kunye neenkcukacha.
Akudingeki ukuba ufunde indlela yokusebenza nale nto okanye ulwimi loluhlu njengoko isixhobo sidibanisa nazo zonke iilwimi zolwimi.
Izixhobo ze-PDF kunye ne-OCR
Ngolwazi lwakho, i-Kantu Editor yilezi kuphela Izixhobo zeOCR. NgeKantu, ukukhipha idatha kwividiyo kunye ne-PDF kufana nokudlala umdlalo wevidiyo.
Izindlela zokusebenzisa i-Kantu
Imoji yesondlo yokubeka iliso - ithuluzi le-Kantu web-scraping lisetyenziselwa ukubeka esweni inkqubela ye-e-business portals. Ukuba unesitolo se-intanethi, i-Kantu ikuvumela ukuba uhlaziye ii-oda ezenziwe kunye neenkcukacha zesicelo;
Hlola uhlole amaxabiso eemveliso ezahlukeneyo;
Ukuhlaziywa kweenkqubo ngeerhafu zokutshintshwa kwamasheya;
Ukulanda nokugcina idatha kwiipredishithi;
Gweba ulwazi oluncedo usebenzisa i-OCR;
Ukulandelela amanqanaba okuncintisana kumgangatho wokuncintisana;
I-Kantu iyiluncedo elisebenzayo lewebhu lokutshiza elithatha idatha kwiwebhusayithi kwaye igcinwe kwiipredishithi kunye neefayile ze-CSV. Ukuba iphrojekthi yakho enkulu elandelayo ixhunyaniswe nokutshitshiswa kwamaxwebhu kunye namavidiyo e-PDF, i-Kantu web-scraping ifanelekile ukuba ithathelwe ingqalelo Source .